Fiarahan-drivotra, varingarina, valve, fittings - SNS Pneumatika
Mba hihaonana amin'ny fampiharana sehatra indostrialy midadasika, ny SNS dia manana andian-tsarimihetsika FRL modular sy fanaraha-maso tsindry amin'ny rivotra. Miaraka amin'ny kalitao tena azo itokisana sy miorina mandritra ny 20 taona mahery, ny singa enti-miasa amin'ny SNS dia safidy mety foana ho an'ny mpanjifa.
SNS dia manamboatra valves amin'ny fisafidianana henjana ny faritra rehetra ao anatin'izany ny aliminioma, coil, lohataona, tombo-kase, menaka, andriamby… avy amina andiana mpamatsy Sina. Ny masinina avo lenta sy ny fizotrany voafehy be ho an'ny faritra lehibe rehetra sy ny fanangonana / ny fanandramana dia mahatonga ny valiny SNS ho azo antoka tsara sy azo antoka. Mba hanohanana ny fitakiana indostrialy mitombo isan'andro, ny SNS dia tsy mitsaha-mivelatra elanelana vaovao isan-taona. Hatramin'izao, manana valizy solenoid isika, valizy tsiranoka, valva-drivotra, valizy polika, valizy fanaraha-maso, valizy fanaraha-maso, valizy mekanika, valizy tanana, valizy tongotra, valizy maloto, valizy fandefasana entana, sns.
Ireo kojakoja pneumatika dia tena manan-danja ihany koa ary ilaina amin'ny rafitra pneumatika indrindra ny fantsona sy ny fittings. Ny SNS dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana ny fittings, ankehitriny dia manana karazana tsindry plastika amin'ny fittings, fanosehana vy amin'ny fittings, mpampifandray pneumatika, fantsom-pneumatika, fantsom-baravarankely, fantsom-panafody PA, fantsom-panafody, fatra fanerena, basy rivotra, sns. SNS koa dia manamboatra ireo vokatra raha toa ka manana fepetra manokana ny mpanjifa. HAMAKY BEBE KOKOA
Ny SNS dia manome endrika marindrano pneumatika marobe hanohanana ny rafitry ny indostria mandeha ho azy, ao anatin'izany ny varingarin'ny pneumatika mahazatra sy ny varingarin'ny pneumatika tsy mahazatra. Ny paozin'ny varingarin'ny pneumatika dia misy varingarina-rodara, varingarina kely, varingarina kely, varingarina piston avo roa heny, varingarin-tsolika, varingarina tsy misy rodite, gripper pneumatika, varingarina fanjaitra, varingarin'ny rotary, varingarin'ny rotary clamping, sns. mivory sy manandrana, SNS dia nanjary mpamatsy indostria mandeha ho azy.
Manana ampahany kely amin'ny vokatra hydraulic ihany koa isika: absorbers shock, valves hydraulic, switch pressure pressure ary silinder hydraulic.
Manana fototra famokarana 5
Mihoatra ny 20 ny orinasa fanampiny
Mpiasa mihoatra ny 1000
Ny orinasa dia mandrakotra faritra 30000㎡
Ny ivelany ivelany, ny kalitao manome toky ary ny vidiny mahomby dia matetika no tadiavinay.
SNS 4V2 Series Aluminium firaka Solenoid Valve Ai ...
Mombamomba ny vokatra &...
SNS APU10X6.5 ambongadiny fantsom-pifandraisana pn air p ...
Mombamomba ny vokatra ...
SNS SC Series firaka vita amin'ny alimina alimina ...
Size habe (mm) 32 ...
SNS AC Series pneumatic air source fitsaboana un ...
SNS 2W andian-dahatsoratra singa mifehy mivantana-mihetsika ...
SNS MOV andian-tsarimihetsika pneumatika fanaraha-maso ...
Famaritana ny vokatra & n ...
SNS SPC Series Lehilahy kofehy mahitsy volo Push ...
SNS SPL Series Male Elbow L karazana Hose plastika c ...